Baby Jupiter waxaa ku dhacay meeraha loo yaqaan '4,5 billion billion years ago - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Baby Jupiter waxaa ku dhacay meeraha 4,5 bilyan sano kahor - BGR
Baby Jupiter waxaa ku dhacay meeraha 4,5 bilyan sano kahor - BGR
Jupiter waxaa muddo dheer loogu amaanay inuu yahay "boqorka meerayaasha meerayaasha" maxaa yeelay cabbirkeeda weyn marka loo eego inta badan meerayaasha kale ee nidaamkayaga qoraxda. Waa mid aad u weyn, badanaana waa gaas, kaasoo ka horjoogsada saynisyahannadu inay ogaadaan waxa ka hooseeya daboolka qaro weyn.
Haweeneyda loo yaqaan 'NASA' ee loo yaqaan 'No' Juno spaceo waxay wax baratay meeraha muddo ka badan sideed sano hadda, waxayna sameysay natiijooyin la yaab leh. indha indheynta xudunta meeraha. Haddaba, daraasad cusub oo ay sameeyeen koox cilmi baarayaal caalami ah ayaa bixin kara sharraxaad.
Baadhitaannada dayax-gacmeedka 'NASA' ee Juno dayax gacmeedku wuxuu soo jeediyay in nukliyeerka Jupiter uusan ahayn kii saxda ahaa ee ay saynisyahannadu mar uun ka fikiri jireen. Nucleusku ma ahan mid cufan sida cilmi-baarayaashu uga shakiyeen, laakiin way adkeyd in la go'aamiyo sababta ay sidaas u dhacday.
"Waa wax la yaab leh," Andrea Isella, oo ah qoraa daraasad cusub oo lagu daabacay Nature . ] ayaa lagu yiri bayaanka . "Waxay soo jeedineysaa in wax dhacay ay kicisay xudunta, halkaasina waa meesha saameynta weyn ay ka soo baxeyso."
Si loo garto hoos udhaca qarsoodiga, kooxdu waxay sii wadatay jilitaanka kumbuyuutarka ee bilowga Jupiter si ay u aragto nooca is dhex galka ee horseedi kara xaalada hada dunida. Waxa ay ogaadeen in ay ahayd saameyn ballaaran, halka meeraha wali ay sameysmayaan, ayaa u badan tahay sharraxa ugu wanaagsan.
"Sababtoo ah waa cufan oo ay soo saartaa tamar badan, soo-saaraha wuxuu u egyahay rasaas ka dhaceysa jawiga oo garaaca wadnaha," ayay tiri Isella. “Saamaynta kahor, waxaad leedahay Nucleus aad u cufan, oo ku hareereysan jawiga. Saamaynta hore waxay faafisaa waxyaabo waxayna kala burisaa xudunta. "
Marka loo eego tusaalayaasha, meeraha ku dhici karay Jupiter waa inay ahaato mid ballaaran. Baarayaasha waxaay qiyaaseen inay ahaan laheyd waqtiyada 10 jeer ay aad uga weynaato Dunida iyo in waxyaabaha ay dhibsan lahaayeen ay u qaadan laheyd bilyano sano inay dib uga soo kabtaan, taas oo sharxi laheyd sababta xudunta Jupiter aysan u aheyn sida cufan iyo cufan. Saynisyahannadu waxay u malaynayaan inay tahay inuu yahay isku dhaf.
Daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday in neefsashada magaalooyinka wasakhaysan ay u daran tahay sida sigaar cabista - BGR